I-Cortexolone 17α-propionate powder (19608-29-8) hplc =98% | I-AASraw
I-Cortexolone 17α-propionate powder
/ Imikhiqizo / Ama-Reagents e-R & D / Cortexolone 17α-propionate powder
SKU: 19608-29-8. Isigaba: Ama-Reagents e-R & D
I-AASraw inokukwazi ukuhlanganisa nokukhiqiza kusuka kugramu ukuya ku-mass of Cortexolone 17α-propionate powder (19608-29-8), ngaphansi komthethonqubo we-CGMP kanye nesistimu yokulawula ikhwalithi.
I-Cortexolone 17α-propionate powder ividiyo
I-Cortexolone 17α-propionate powder Izinhlamvu eziyisisekelo
Igama: I-Cortexolone 17α-propionate powder
Formula Yamamolekhula: C24H34O5
Umbala: I-white to off-white powder powder
Umjikelezo we-Cortexolone 17α-propionate
Amagama Amakhemikhali: i-cortexolone-17α-propionate,
Amanye Amagama: CB-03-01, i-Winlevi powder, i-Breezula powder, i-11-deoxycortisol i-17α-propionate, i-Cortexolone 17α-propionate powder
Ukusetshenziswa kwe-Cortexolone 17A-propionate
I-Cortexolone 17A-propionate iyinhlangano yokwelapha i-steroidal antiandrogen - ngokuqondile, i-androgen ye-receptor antagonist - engaphansi kokuthuthukiswa yi-Cassiopea ne-Intrepid Therapeutics ukuze isetshenziswe njengemithi yokwelapha okwelapha izimo ezixhomeke ku-androgen kuhlanganise ne-acne vulgaris ne-androgenic alopecia (iphethini lesilisa ukulahlekelwa kwezinwele).
Iyiphi isilinganiso se-Cortexolone 17α-propionate
I-Cortexolone 17A-propionate i-1% ukhilimu, i-antiandrogen entsha enamandla yokwelashwa kwama-acne vulgaris. I-pilot yokuhlola okungahleliwe okungahleliwe, okuphindwe kabili-mpumputhe ngokumelene ne-placebo ne-tretinoin 0 · 05% ukhilimu.
I-Acne vulgaris yinkinga yeyunithi ye-pilosebaceous lapho i-androgens ifaka isandla ekuqaliseni nasekuphikeleni kwayo. Ngakho ukusetshenziswa kwe-antiandrogens kungase kuphumelele; Kodwa-ke, i-antiandrogens yokusetshenziswa kwama-topical ayitholakali emakethe. I-Cortexolone 17α-propionate iyisifo esisha esinamandla se-antiandrogen esingahle sisebenziseke ekusebenzeni kwe-acne vulgaris.
Ukuhlola ukuphepha nokusebenza kahle kwe-Cortexolone 17α-propionate 1% ukhilimu ku-acne vulgaris uma kuqhathaniswa ne-placebo kanye ne-tretinoin 0 · 05% ukhilimu.
Amadoda angamashumi ayisishiyagalombili nesikhombisa anezinyosi ebusweni ahlose i-2-3 ngokusho kwe-Investigator's Global Assessment (IGA) ayengakahleleki ukuthola i-placebo cream (n = 15), noma i-Cortexolone 17α-propionate i-1% ukhilimu (n = 30), noma i-0 · 05 % ukhilimu (n = 32) kanye ngosuku ngosuku lokulala ngamaviki e-8. Ukusebenza komtholampilo kuhlolwe njalo emavikini e-2 kubandakanya inani le-lesion count (TLC), isibalo se-lesion sokuvuvukala (ILC), inkomba ye-acne gravity (ASI) ne-IGA. Ukuhlolwa kokuphepha kuhlanganisa amaphuzu okuhlaselwa kwendawo, izivivinyo zebholabhu, ukuhlolwa ngokomzimba, izimpawu ezibalulekile nokuqoshwa kwezenzakalo ezimbi.
I-CB-03-01 ukhilimu yayibekezeleleke kakhulu, futhi yayingcono kune-placebo ephathelene ne-TLC (P = 0 · 0017), i-ILC (P = 0 · 0134) ne-ASI (P = 0 · 0090), kanye nokusebenza kahle emitholampilo kunomqhathanisi. Umkhiqizo uphinde wenza ukuthi kutholakale ngokushesha ukuthuthukiswa kwe-50% kuyo yonke imingcele engenhla. I-CB-03-01
Lolu cwaningo lwabaqhubi lusekela umqondo wokusetshenziswa kwe-antiandrogens yama-topical ekwelapheni kwe-acne vulgaris. I-Cortexolone 17α-propionate i-1% ukhilimu ibonakala ifanelana nephrofayili ye-antiandrogen enhle yokusetshenziswa kwezingqikithi.
I-Cortexolone 17α-propionate (i-CAS 19608-29-8), noma i-11-deoxycortisol 17α-propionate, i-anti -rogenal steroidal antiandrogen - ngokuqondile, i-androgen receptor antagonist - engaphansi kokuthuthukiswa yi-Cassiopea ne-Intrepid Therapeutics ukuze isetshenziswe njengemithi yokwelapha ukwelashwa kwezimo ezixhomeke ku-androgen ezihlanganisa i-acne vulgaris ne-alorocia androgenic (ukulahleka kwezinwele zesilisa). I-proxy ester ye-C17α ye-11-deoxycortisol (i-cortexolone); I-C17α esters ye-11-deoxycortisol yayitholakale ngokungalindelekile ukuba ibe ne-antiandrogen, futhi i-cortexolone 17α-propionate ikhethwe ngentuthuko ngokusekelwe kuphrofayli yayo eyizidakamizwa.
Ezimvuthweni, isidakamizwa sitholakale sibe nomsebenzi oqinile we-antiandrogen wendawo, kodwa umsebenzi ongasebenzi ngokweqile we-antiandrogen uma ulawulwa nge-injection encane. Ngaphezu kwalokho, i-cortexolone i-17α-propionate ayiyona into eyenza i-progonadotropic, ephakamisa ukuthi ikhetha ngokuzenzakalelayo. E-bioassay, ubuciko be-topical yalesi sidakamizwa bukhulu kunaleyo ye-progesterone, i-flutamide, ne-finasteride futhi yayilingana neye-acetate ye-cyproterone.
Umshayeli wendiza ocwaningweni lwezempilo e 2011 zabantu ziphathwe cortexolone nezokusigcoba 17α-propionate 1% ukhilimu ngoba induna wathola ukuthi izidakamizwa yayimi kahle kakhulu kubekezelelwe futhi kakhulu ziyancipha izimpawu induna. Ngaphezu kwalokho, ukuphumelela kwawo kwakukukhulu kakhulu kunomlingisi osebenzayo, i-tretinoin 0.05% ukhilimu. Njengo-2017, lo muthi usezivivinyweni zesigaba se-III ze-acne vulgaris nezilinganiso zesigaba sesibili se-clinical for alopecia androgenic.
I-Cortexolone 17α-proprionate, i-Breezula powder kumafomu awo e-polymorphic: umndeni wokuqala we-patent, ophelelwa yisikhathi e-United States ku-2022 / 23 naku-2022 kuwo wonke umhlaba, uhlanganisa ukusetshenziswa kwezokwelapha kwe-compound ekwelapheni induna, i-alopecia ezinye izifo; umndeni wesibili wobunikazi uhlanganisa wonke amafomu e-crystalline eyaziwayo we-API, izingoma eziqukethe i-API efanayo nokusetshenziswa kwezokwelapha okuhlobene ekuphatheni izinkukhu, i-AGA nezinye izifo: lo mndeni we-patent usuvele ukhishwe e-United States, Europe, Canada, Japan amanye amazwe, azophelelwa yisikhathi ku-2030 e-United States nase-2028 kuwo wonke umhlaba.I-Breezula powder
I-Cortexolone 17α-propionate Powder Raw
I-Cortexolone 17α-propionate Ama-Recipes Powder Recipes
Ukuze uphenye ikhasimende lethu elimelelekile (CSR) ngemininingwane, ngokubhekisela kwakho.Winlevi powder
Ingabe i-Cortexolone 17α-propionate Inayo Yimuphi Umphumela Wecala
I-Cortexolone i-17α-propionate iyi-steroidal-ester entsha, ekhethiwe futhi i-androgen-antagonist, ehlinzekwa ngomsebenzi omncane wokubulala, obonakala efanelwe ukwelashwa kwama-acne vulgaris. I-CB-03-01 isebenza ezingeni le-androgen-receptor ngaphandle kokuvimbela i-5α-reductase esikhumbeni. I-steroid ilula kalula kalula isikhumba somuntu futhi isetshenziswe ngokushesha ukuze ikhululeke i-cortexolone yomzali okungenayo imiphumela yesistimu. Okubalulekile, kuze kube yimanje, akubonanga noma yimiphi imiphumela yecala ye-steroid yendawo noma yesistimu.
Indlela yokuthenga i-Cortexolone 17α-propionate powder kusuka ku-AASraw
I-Cortexolone 17α-propionate Ama-Recipes Powder Recipes:
Ukwelashwa Kwezinwele Ezinhle Kakhulu Kwezinwele: I-Cortexolone 17α-propionate powder (i-CB-03-01)